Izintaba ze-Andes eVenezuela | Ukuhamba kwe-Absolut
Olunye uhla lwezintaba ezinhle kakhulu futhi olubanzi emhlabeni yi Izintaba ze-Andes. Linqamula amazwe amaningana eNingizimu Melika futhi lihamba lonke Amakhilomitha angama-8500s sobuhle obumsulwa ...
Ingxenye yalolu hambo lwezintaba iwela iVenezuela, yilokho okubizwa ngeNyakatho Andes: uhla oluhle lwezintaba oludlula naseColombia nase-Ecuador. Kepha namhlanje sizogxila kuphela ku- Izintaba ze-Andes zaseVenezuela.
1 Izintaba ze-Andes
2 Ezokuvakasha e-Andes yaseVenezuela
Lona iyintaba ende kunazo zonke yezwekazi emhlabeni futhi ingahlukaniswa imikhakha emithathu, i- Ama-andes asenyakatho, the I-Andes centrales kanye ne- I-Andes eseNingizimu.
Ama-Andes asenyakatho, lawo asibizayo namuhla, angaphansi kwamakhilomitha ayi-150 ububanzi nokuphakama okuphakathi kwamamitha ayi-2500 XNUMX. I-Andes enkabeni yiyona ebanzi futhi ephakeme kakhulu.
Ama-Andes asenyakatho, abizwa nangokuthi ama-Andes asenyakatho, Zisukela ekucindezelekeni kweBarquisimet-Carora, eVenezuela, kuye ethafeni laseBombón, ePeru. Amadolobha aseVenezuela afana neMérida, iTrujillo noma iBarquisimeto, akulezi zintaba ezibalulekile.
Lapho lezi zintaba zidlula khona, indawo yaseVenezuela ithola izici ezengeziwe zomuntu. Kunemihlaba eyisicaba olwandle kepha kukhona iziqongo eziphakeme, yingakho kunemibala eminingi nezakhiwo zomhlaba okumangalisayo.
Izintaba i-Andes eVenezuela zinezici ezintathu eziyinhloko: i ISierra de La Koulata, iSierra Nevada neSierra de Santo Domingo. Zifinyelela ukuphakama okungafika kumamitha ayi-5 5.007. Isibonelo, isiqongo esiphakeme kunazo zonke ezweni silapha, ngamamitha aso angu-XNUMX, i- Inani eliphakeme laseBolivar. Yize kukhona nabanye abahloniphekile abafana ne- I-Humbold ngamamitha angu-4-940, iBompland ngamamitha angu-4880 noma iNgonyama ngamamitha ayo angama-4.743.
Isimo sezulu sihamba phakathi kwesimo sezulu esisezindaweni ezibandayo, esiphakeme kakhulu, nesimo sezulu esishisa kakhulu phansi kwezintaba. Lina, njengakulo lonke izwe, kusukela ngo-Ephreli kuya kuNovemba. Imifula iwela phakathi kwezintaba, okuyizinto ezingeke zikwazi ukuhanjiswa ngoba zimfushane futhi zinamanzi amakhulu. Lokhu kugeleza kungena ezimbizeni ezimbili ze-hydrographic: ngakolunye uhlangothi, enye eseCaribbean, idlula eLake Maracaibo, futhi ngakolunye uhlangothi, i-Orinoco, idlula eMfuleni i-Apure.
Izimila zendawo nazo zingaphansi kwesimo sezulu, futhi isimo sezulu, esesivele siyazi, sihlobene kakhulu nokuphakama. Kukhona uhlaza olujwayelekile lwezimo ezishisayo nezome kakhulu kumamitha okuqala angu-400 wokuphakama, bese kuvela Izihlahla ezinkulu, ngaphezulu kwamamitha ayizinkulungwane ezintathu ezihlahleni, ephakeme kusekhona uhlaza lweParamera nangaphezulu kwamamitha ayizinkulungwane ezine esivele sinayo ubulembu nobulembu.
Ngakho-ke i-Andes yaseVenezuela iyakha okuwukuphela kwesifunda ezweni esinalo uhla lwezinhlobo zezitshalo. Endaweni enezihlahla ezinkulu, phakathi kwamamitha ayi-500 kuya ku-2 XNUMX, indawo ebukeka njengehlathi lemvula ngakho kunemisedari, ama-laurels, ama-bucares, ama-mahogany ... Kuhle, Lezi zinhlobonhlobo zezitshalo nazo ziyabonakala ezilwaneni.
Ezilwaneni zaseVenezuela zase-Andean kukhona amabhere, i-condor edumile yama-Andes . izinyoka, izibankwa nama-dorado nama-guabinas, phakathi kwezinhlobo zezinhlanzi.
Ukunwetshwa kwe-Andes yaseVenezuela kwenza Ngokukhuluma ngokwendawo nangokwezwe bawela izifundazwe eziningana zezwes: Barinas, Apure, Portuguesa, Táchira, Mérida noTrujillo. Futhi njengoba sishilo ngenhla, kunamadolobha amaningi abalulekile njengeMerida, iTrujillo, iBoconó, iSan Cristóbal ...
La umnotho wendawo yayijwayele ukugxila ekukhanyeni ikhofi nokulima, kepha ngemuva kokutholakala kwe- i-petroleum izinto zashintsha. Akukhona ukuthi izilimo seziyekile ukwenziwa, empeleni kusuka lapha kuza ukukhiqizwa kwamazambane, imidumba, izihlahla zezithelo, imifino, ubhanana kanye nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, izingulube, izinkukhu kanye nezinkomo emakethe yasendaweni, kepha namuhla uwoyela ungamandla.
Ezokuvakasha e-Andes yaseVenezuela
Yize isikhathi eside le ngxenye yeVenezuela ibikude nezokuvakasha, sihlala sihlobanisa izwe neCaribbean, okwesikhashana manje, livulekele lo msebenzi. Ukuthuthuka kwengqalasizinda yezokuxhumana (ukwakhiwa kwemigwaqo okwenziwe ngcono emashumini eminyaka amuva nje) kube yinjini.
Yize ukuhlukaniswa lapho abantu okuthiwa baseningizimu babekwa ngaphansi kwabo kwabagcina bekude nemali okushiyelwa ezokuvakasha, ngandlela thile kwabasiza ukuba babe wusizo olukhulu kulo makethe namuhla. Futhi yilokho ukuhlukaniswa kubalondoloze kubo bonke ubungqayizivele babo bomdabu nabokoloni.
Labo abahlala kule ngxenye yezwe bagqugquzela a ukuvakasha okulula, umthelela ophansi, elondoloza indlela yabo yokuphila nemvelo. Ezokuvakasha ezisezandleni zabantu uqobo noma ezokuvakasha esingazibiza ngomphakathi.
Singakhuluma ngezinye Izindawo ezinconyiwe lapha e-Andes yaseVenezuela. Isibonelo, idolobha lase Merida. Yasungulwa ngo-1558 futhi inobuhle isigqoko sokuzivikela samakholoni, ngenkathi sizungezwe izintaba ezinhle. Ungabona iSigodlo Sombhishobhi Omkhulu, ikomkhulu le-Universidad de los Andes, iCathedral noma Isigodlo Sikahulumeni.
IMerida inemigwaqo emihle, umphefumulo wesitshudeni, a imakethe kamasipala esinezitezi ezintathu simatasa kakhulu futhi sithandwa, indawo yokudla u-ayisikhilimu enokunambitheka kuka-ayisikhilimu okungaphezu kuka-600, i- Indawo yase-Coromoto ice cream, inendawo yayo endaweni IGuinness Book of Records namapaki amaningi nezikwele. Elinye lamapaki adume kakhulu yiLos Chorros de Milla, enamachibi, izimpophoma kanye ne-zoo.
Kukhona futhi i- Imoto yekhebula iMérida okukuyisa ePico Espejo ngamamitha angu-4765, ngaphansi kancane kune-Mont Blanc yaseYurophu. ILos Aleros Folk Park, i- Ingadi Yezitshalo ngokuhamba kwayo okuhlekisayo ezihlahleni ... Futhi uma uthanda izintaba onazo ukuvakashela eSierra Nevada ngeziqongo zazo ezinhle kakhulu.
Elinye idolobha elidumile yi ISan Cristóbal, inhlokodolobha yesifundazwe saseTáchira, ngaphansi kwamamitha ayi-1000 wobude futhi ngakho-ke ngenhla enhle kakhulu. Isukela ku-1561 futhi isondele emngceleni neColombia ngakho-ke kuthengiswa kakhulu. Futhi, inamasonto amaningi amakoloni okufanele avakashelwe.
Trujillo Inhlokodolobha yesifunda esincane kunazo zonke saseVenezuela i-Andean. Kuyinto yamakholoni kakhulu futhi enhle njengawo wonke umbuso. Yasungulwa ngo-1557 futhi iphakeme ngamamitha angama-958. Kuyaziwa ngesithombe esikhulu seVirgin of Peace, esinamamitha angaphezu kwama-46 ukuphakama namathani ayi-1200 wesisindo. Inezindawo zokubuka ezinhle futhi isithombe esivela lapha kufanele. Idolobha elidala lihle, linombhishobhi omuhle nothando.
Ezinye izindawo ezinhle yiJajó, Táriba, Peribeca, Capacho ... zonke lezi zindawo zinentelezi yazo kanye nomkhakha wazo we-gastronomic kanye nehhotela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izintaba ze-Andes eVenezuela